कोभिड खोप लगाएका दम्पतिले सन्तानको योजना बनाउन ढिलाई गर्नु आवश्यक छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोभिड खोप लगाएका दम्पतिले सन्तानको योजना बनाउन ढिलाई गर्नु आवश्यक छ?
स्वास्थ्यखबर मंगलबार, जेठ ११, २०७८, १०:०८:०२
काठमाडौं - कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि धेरै सुनिएको एउटा जिज्ञासा हो, खोप लगाएको कति समयपछि सन्तानको योजना गर्न सकिन्छ खोप लगाएपछि गर्भवती हुने समयमा ढिलाई गर्नुपर्ने पो हो की?
यो जिज्ञासा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई धेरै नै आउने गरेको छ। स्वास्थ्यखबरमा पनि यी जिज्ञासा पठाउँदै पाठकले विज्ञ डाक्टरको सुझाव मागिरहेका छन्।
सन्तानको योजना बनाइरहेका दम्पतिले कोभिड खोप लगाएपछि गर्भवती हुन कति समय पर्खनु पर्छ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। पछिल्लो समय खोपको पहिलो मात्रा लगाएका वा कोभिड खोपको पूर्ण मात्रा पाएका दम्पतिहरुले सन्तानका योजना बनाइरहेको समयमा खोप लगाएकै कारण समस्या हुनेबारे जिज्ञासा राख्दै आएकको बताउँछिन् परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी निर्देशक डा संगिता कौशल मिश्रा।
डा मिश्राका अनुसार कोभिड खोपले प्रजनन् क्षमतामा, गर्भवती हुन कुनै पनि समस्या हुँदैन।
उनले खोप लगाएपछि गर्भवती हुन कुनै समस्या नहुने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन्। उनले भनिन्,‘खोप लगाएपछि पनि सन्तानको योजना बनाउन कुनै समस्या छैन। भर्खरै प्रकाशित भएका अध्ययनले खोप लगाएका महिला गर्भवती भएमा बच्चामा समेत एन्टीबडी विकास भएको कुराहरु देखाएको छ। श्रीमान श्रीमती दुबैले खोप लगाएको भएपनि गर्भवति हुन समस्या हुँदैन।’
उनले कोभिड खोपले प्रजनन् क्षमतामा असर परेको कुनै प्रमाणहरु हालसम्म फेला नपरेको अध्ययनले देखाएको पनि स्पष्ट पारिन्। त्यसैले खोप लगाएकै कारणले गर्भवती हुन ढिलाई गर्नुपर्ने पनि कुनै कारण नभएको बताइन्।
उनले सन्तानका योजना बनाइरहेका दम्पतिहरु जसले कोभिड खोप लिएका छन्, उनीहरुलाई चिकित्सकसँग परामर्श गर्न भने आग्रह गरिन्।
परिवार कल्याण महाशाखाका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा झलक शर्माले पनि कोरोना खोप लगाएका महिलाले गर्भवती योजना बनाएको भएमासमय सार्न नपर्ने बताए।
उनले भने, ‘खोप लगाएका महिलाले दोस्रो डोज लगाउन, गर्भवती हुन र कसैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने पनि त्यसलाई छाड्न वा केही समयका लागि रोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कोरोना खोपले यी कुनै पनि कुरालाई असर गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन।’
उनले पहिलो डोज खोप लगाएका महिला बिचमा गर्भवती भएमा दोस्रो डोज खोप पनि समयमा नै लगाउनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, स्तनपान गराइरहेकी महिलाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् भने उनीहरुले बच्चालाई स्तनपान गराउन छाड्न नपर्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी)ले समेत कोभिड खोप लगाएका महिलाको प्रजनन् क्षमतामा समस्या भएको हालसम्म कुनै तथ्य फेला नपरेको उल्लेख गरेका छन्।
बढ्दै कोरोना संक्रमण दर, २४ घण्टामा ३८४० जनामा संक्रमण पुष्टि